​सिँउदोमा सिन्दुर लगाउनु हुन्छ ? सावधान ! स्वास्थमा असर पुग्ला
सामान्यता हिन्दूधर्मावलम्बि महिलाले विवाह पश्चात सिन्दुरको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, त्यस्ता सिन्दुर स्वास्थ्यका हिसाबले भने हानिकारक मानिन्छ ।
एक अध्ययन अनुसार सिन्दुरमा लिड अर्थात् सिसाको अधिक प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । लिड मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । सिन्दुरको रंगलाई गाढा....
​आँखाको ज्योति बढाउन पिउनुस् यी जुस
आजभोलि प्रायः मानिसहरु आँखाको ज्योति कम हुने समस्याका कारण पीडित छन् । ठूला मानिसहरू मात्र नभई ससाना बच्चाको समेत आँखा कमजोर हुँदै गएको पाइन्छ ।
खानपानमा पौष्टिकताको कमी र पूरै दिन मोबाइल वा टीभी हेर्नाले आँखाको ज्योति घट्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा गाजर आँखाका....
​कसरी रहने चाडबाडमा स्वस्थ्य ?
चाडपर्वको मौसम भएकाले जहाँ गए पनि मीठामीठा परिकार खानुपर्ने हुन्छ । आफन्तकोमा गएर केही नखाँदा उनीहरू रिसाउन सक्छन् । त्यसैले आफन्तलाई खुसी पार्न र आफ्नो तौललाई सन्तुलनमा राखी स्वस्थ्य रहन सजिलो छैन । त्यसका लागि यस्ता केही सजिलो उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
​यसकारण खानुहोस् पिपलको पात
हाम्रो समाजमा पिपलको पूजा गरिन्छ । धार्मिक विश्वासअनुसार लक्ष्मीको श्रापका कारण विष्णु भगवान पिपल बनेर उम्रिएका थिए । तर, वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पिपलको महत्व धेरै छ । पिपलले २४ घण्टा अक्सिजन दिन्छ । पिपल औषधिय गुणले भरिपूर्ण बनस्पती हो । यसको पातबाट धेरै औषधिहरु बनाउन सकिन्छ....
​मुटु जोगाउन त्याग्नुहोस् यी खराब बानी
धेरै रक्सी पिउँदा उच्च कोलेस्ट्रेल, उच्च रक्तचाप र कलेजोमा खराबी देखा पर्छन् र यी सबै मुटुरोगका कारण बन्न पुग्छन् ।
धेरै तनाव लिँदा रक्तचाप बढ्छ र मुटुमा दबाब पर्छ जसका कारण मुटुरोग लाग्छ ।
शारीरिक काम नगर्दा रक्तप्रवाहमा समस्या आउँछ, रगत राम्ररी बग्न....
छालाका यस्तो डल्लो छ ? हटाउने तरिका यस्ता छन्
मानिसको छालामा आउने साना साना डल्लाले मानिसको सुन्दरतालाई कुरुप बनाउँछन् । तर तरिका जानियो भने यस्ता डल्ला घरै बसेर हटाउन सकिन्छ । चुक अमिलोले यी डल्ला हटाउन मद्दत गर्छन् । एप्पल साइडर भिनेगर (स्याउबाट बनेको चुक अमिलो) ले सजिलै डल्ला हटाइदिन्छ ।
​यसरी चिन्नुहोस् स्वस्थकर मासु
कतिपय अवस्थामा हामीलाई कसरी मासु छान्ने भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुँदैन । मासु हल्का र गुलाबी रङको हुनु हुँदैन । प्याजी तथा हरियो रङको मासु खानयोग्य हुँदैन ।
कहिलेकाहीँ हामीले थाहै नपाई मासु एक किसिमको अमिलो गन्ध आउँछ । त्यस्तो मासुमा पनि ध्यान दिनुपर्छ....
दशैँमा मान्यजनको हातबाट आशिर्वाद लिएसँगसँगै जमरा पनि लगाउने गरिन्छ । दशैँमा पहेलो जमारा लगाइन्छ जुन धार्मिक महत्व र....
​धेरै नखानुहोस् यी खाना, चाँडै झर्नसक्छ तपाईको कपाल
कपाल समयपूर्व नै झर्नु आजकाल सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । कपाल झर्नुका पछाडि धेरै कारण हुनसक्छ जसमा रोग र बंशानुगतका साथै खानपिन पनि समावेश छन् ।
के खाँदा झर्छ कपाल ?
केही खानेकुरा धेरै खाँदा रगतमा बायोटिनको कमी हुन थाल्छ जसले....
प्रायः सबैको भान्सामा सजिलै पाइन लसुन मसलाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यसमा औषधीय गुण पनि हुन्छ । आयुर्वेदमा मात्र नभएर प्याथोलोजी विशेषज्ञहरू पनि यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दा धेरै फाइदा हुनेमा विश्वास गर्छन् । त्यही भएर कतिपय चिकित्सकले बिरामीलाई सन्तुलित भोजनबारे सल्लाह दिँदा खानामा लसनुको....